Islamabad Expert avy amin'ny Semalt: inona no fanamarinana spam ary ahoana no hampiatoana azy
Ny Google Analytics dia iray amin'ireo tolotra am-pihetsiketsehana indrindra, mahasoa ary malaza indrindra amin'ny aterineto. Mitatitra sy mizara ny fifamoivoizan'ny tranonkala iray izy ary manome ny fitaovana fitadiavam-bola ho an'ny marketing sy ny tanjona SEO. Azo antoka ny filazana fa ny Google Analytics dia ny serivisy fanaraha-maso tsara indrindra sy azo antoka indrindra amin'ny aterineto. Indrisy anefa, ireo mpitsoa-ponenana dia nanamboatra fomba fitadiavana tambajotra amin'ny tranonkalany manokana amin'ny fampiasana ny kaonty Google Analytics sy ny tranonkalanao.
Ny fiheverana dia heverina ho toy ny tena manan-danja indrindra amin'ny fanombanana ny fampisehoana sy ny fisian'ny tranonkala iray - gazebo gonfiabili vendita. Ny fifamoivoizana sarobidy kokoa azonao raisina, ny avo indrindra dia ny fahafahanao mahazo tombony amin'ny orinasa an-tserasera. Misy zavatra maro misy fiantraikany amin'ny hatsaran'ny tranokala amin'ny tranokala .
Mba hahalalanao raha mahazo ny fifamoivoizana na tsia ny tranokalanao, dia tokony hitadidy ireto zavatra manaraka ireto avy amin'i Nelson Gray, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt .
Inona no fifamoivoizana sandoka?
Ny fitadiavana sandoka na sandoka sandoka dia entin'ny spiders, crawlers, ary bots, ary ny fifamoivoizana dia avy amin'ny fifandraisan'olombelona. Ao amin'ny kaontinao Google Analytics, ny fitohanana fifamoivoizana dia hosoratana ho toy ny tena izy, ary ireo mpitsikilo dia afaka mamitaka mora foana amin'ny tatitra Google Analytics miaraka amin'ny hevitrao, ny fisehoan-javatra, ny fitenenana, ny fijerena ny sary, ary ny fifanakalozan-dresaka. Ho an'ity tanjona ity, dia mitaky ny ID fananan-tany Google Analytics anao izy ireo.
Spam referrer sy ny fiantraikany amin'ny kaonty Google Analytics
Ny referrer dia karazana rohy izay zaraina amin'ny lohan'ny HTTP rehefa mivezivezy amin'ny tranokala iray hafa ny tranonkala. Ny vaovao dia manamarina ao amin'ny kaonty Google Analytics ary manome anao ny tatitra marina momba ny hoe iza no mpihaino anao sy ny fomba ifandraisan'ilay olona amin'ny tranokalanao. Tsy azo antoka ny filazana fa ny spam referendra dia hanimba ny tatitra Google Analytics. Tsy afaka mamorona olana lehibe ho anao ny spam referrer. Ary raha manana tranokala kely na maody ianao, dia mety tsy hanatsara ny karoka karoka (Google), Bing, ary Yahoo famerana noho ny referrer spam.
Ireo mpitsikilo dia manao toy izany amin'ny kaonty Google Analytics maro miaraka amin'ny fanampian'ny botsa sy ny sponjy. Tian'izy ireo ny hanintona anao mankany amin'ny tranonkala, mamokatra vola miditra avy amin'ny kli-tsidinao sy ny fahitana pejy.
Ahoana ny fomba hamantarana sy hanamafisana ny spam referendra?
Raha te hahita sy hamaha ny spam referrer ianao, dia tsy maintsy mivezivezy amin'ny tatitra fanavaozana ny kaonty Google Analytics ary manova ny daty ka hatramin'ny telo volana farany. Raha manao izany ianao, dia ho hitanao fa hanomboka mihena ny taham-pihetseham-potoana ary hihatsara ny kalitaon'ny fifamoivoizana. Ny fifehezana miaraka amin'ny seza 15 na mihoatra dia mety hanana sanda 0% na 100%. Raha tsy azonao atao ny mamantatra sy manamboatra azy, dia mandehana ao amin'ny kaontinao Google Analytics ary mamorona filaharam-panazànana ahafahanao mampiditra ny anaran'ireo anaran-toerana mampiahiahy.
Raha vao fantarinao ny spam referrer, dia tokony hanakana ny tranokala toa darodar.com ianao raha mbola azo atao, mba tsy hitsidihany ny tranonkalanao indray. Koa satria ny fitsidihany dia voarakitra ao amin'ny rakitra mpanonta sy ny tatitra Google Analytics anao, dia azonao atao ihany koa ny manova ny antontan-taratasinao .htaccess. Ny fanalahidy hanakanana ny spam referrer dia ny fidirana amin'ny tranokala ahiahiana ary manasaraka izany. Tokony hampiato ny tahan'ny .htaccess amin'ny fomba tsy tapaka mba hiantohana ny fiarovana ny tranokala.